Malunga Nathi-Shenzhen Mcldosly Tech Co., Ltd.
MCLDOSLYngumvelisi wolawulo lomdlalo wevidiyo oqeqeshiweyo iminyaka eneworkshop yakhe yokuvelisa.Umzekelo, sinomgca we-SMD wolawulo lomdlalo wokuchwetheza kunye nokubopha i-ic, kunye ne-silkscreen yelogo elungiselelweyo, i-OEM kunye ne-ODM kubathengi, kunye nomgca wemveliso emithandathu yokuvelisa izincedisi zomdlalo kunye nomgca wemveliso emibini yokupakisha, kunye nemveliso emibini yokuhlola kunye nomlawuli wokuvavanya. phambi kokuthunyelwa.Umlawuli wethu weMidlalo Njengomlawuli we-PS3, umlawuli we-PS4, izincedisi ze-PS5, umlawuli we-Pro switch kunye noTshintsho lwe-Joy-con controller, isilawuli sefowuni ephathwayo ye-android kunye ne-IOS kunye nomlawuli we-xbox zilungile kwaye zithengisa zishushu eYurophu, eMelika, empuma ephakathi kunye namazwe ase-Asia kulabo. abathengisi, iinkampani ze-e-commerce, iinkampani zekhompyuter kunye neenkampani zeTV kunye neevenkile ezinkulu zokulawula umdlalo.
Abalawuli bomdlalo be-MCLDOSLY benzelwe ukwenza iPlaystation kunye neNintendo Shintsha amava okudlala ekhonsoli kulo naliphi na iqonga lomdlalo elinomsebenzi olula, ukudibanisa okulula kunye nokudibanisa, ukuqina okugqithisileyo kunye nobomi obude bebhetri.Uyilo olugqibeleleyo lokuqalisa kunye nezinti zokucofa ezicofayo zikwenza wonwabele amava apheleleyo econsole.Kwaye kulula kakhulu ukudityaniswa kunye nokuqhagamshelwa ngebluetooth okanye i-USB, iplagi kwaye udlale ngokuthe ngqo kwiPlaystation, xbox kunye neNintendo Switch Consoles Windows 7/8/10/XP/Laptop, PS3, Tshintsha, Android, TV Box ngebluetooth okanye Iadaptha engenangcingo ye-USB.Baxhasa umdlalo odlalwa ngaphezu kwamawaka emidlalo yomphunga kunye neeyure ze-10-20 zokudlala ngebhetri ye-lithium ion.
Sithatha isigqibo sokubonelela abadlali ngenqaku lemidlalo lokwenyani ukuze bajikeleze entliziyweni yenkcubeko yokudlala.Abalawuli bethu bayilelwe ngokukodwa oku kudlala iingcali ezingahoywanga kunye nabathanda umdlalo.Ukuzinikela kwethu okuphambili kukuchaza, ukuyila kunye nokuphuhlisa abalawuli abanobuchule obuphezulu kunye netekhnoloji, ukuphucula indlela yokudlala yeshishini lokudlala ividiyo kunye nokuqhubela phambili inkcubeko yokudlala ividiyo kumanyathelo alandelayo.
Sinikezela ngemveliso ekhawulezayo kunye nexesha lokuhambisa elifutshane kodwa eyona nkonzo ingqongqo yokulawula umgangatho wemveliso, wamkelekile nayiphi na imibuzo kunye neprojekthi ye-OEM kunye ne-ODM.